रिडी हाईड्रोको सेयरमा किन चमक? अबको टार्गेट कति ? – Investing Nepal
रिडी हाईड्रोको सेयरमा किन चमक? अबको टार्गेट कति ?
By: Nepse Direct May 10, 2021
रिडी हाईड्रोपावर RHPC 1.91 % 205.00 अर्थात आरएचपीसी मार्च ११, २००१ मा स्थापित गुरु प्रसाद न्यौपाने समुहले प्रवर्धन गरेको एक प्राईभेट कम्पनि भए पनि पछि २००८ मा सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको सुचिकृत पब्लिक कम्पनी हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २०१४ देखि यो कम्पनी सुचिकृत छ ।
कम्पनीले २००९ मा २४०० किलोवाट रिडीखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्यो र राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा बिजुली आपूर्ति गर्दैछ। धादिङ्गमा
५०० किलोवाटको राईरंग खोला जलविद्युत र ताप्लेजुगलनमा ९९०० किलोवाटको इवाखोला परियोजना सम्पन्न गर्ने तरखरमा यो कम्पनीले रफ्तारमा अघि बढेको छ । यो कम्पनीले बुटवल रुपन्देही जिल्लामा ८.५ मेगावाटको नेपालकै पहिलो ठुलो सौर परियोजना स्थापना गरेको छ र उक्त सौर्य परियोजना हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान भइसकेको छ ।
किन बढ्दैछ आरएचपीसीको सेयर मूल्य ?
धादिङ्गमा रहेको ५०० किलोवाटको राईरंग खोला जलविद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा अगामी महिना अर्थात यहि आर्थिक बर्षमा जोडिने गरि काम भईरहेको हँुदा उक्त जानकारी प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताहरुले धमाधम यो कम्पनीको सेयर किनिरहेका छन । यसै बर्ष सौर्य परियोजना तथा राईरंग खोला परियोजना सम्पन्न गर्ने भएपछि लगानीकर्ताहरु हौसिएका हुन । साथै ताप्लेजुगलनमा रहेको ९९०० किलोवाटको इवाखोला परियोजनाको कार्य पनि रफ्तारमा अगाडि बढेको कारण आरएचपीसीमा लगानीकर्ताहरुको आँखा लाग्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ ।
रु २५० प्रति कित्ता कारोबार भईरहेको यो कम्पनीको मूल्य चाँडै ३०० माथि पुग्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।